PHOTOS: Dubai Comic Con 2020 begins in light of the coronavirus epidemic | Hindustan Times
Home / Photos / Lifestyle / PHOTOS: Dubai Comic Con 2020 begins in light of the coronavirus epidemic
PHOTOS: Dubai Comic Con 2020 begins in light of the coronavirus epidemic
UPDATED ON MAR 06, 2020 04:47 PM IST 14 Photos
A cosplayer dressed as a creation from "Star Wars" attends the Middle East Comic Con in Dubai, United Arab Emirates, Thursday, March 5, 2020. The Middle East Film & Comic Con has begun in Dubai, a city of skyscrapers and nightclubs suddenly subdued by the outbreak of the new coronavirus across the region. (AP Photo/Kamran Jebreili) (AP)
UPDATED ON MAR 06, 2020 04:47 PM IST
A man watches his mobile phone while wearing a face mask at the Middle East Comic Con in Dubai, United Arab Emirates, Thursday, March 5, 2020. The Middle East Film & Comic Con has begun in Dubai, a city of skyscrapers and nightclubs suddenly subdued by the outbreak of the new coronavirus across the region. (AP Photo/Kamran Jebreili) (AP)
A man dances as he wearing a face mask at the Middle East Comic Con in Dubai, United Arab Emirates, Thursday, March 5, 2020. The Middle East Film & Comic Con has begun in Dubai, a city of skyscrapers and nightclubs suddenly subdued by the outbreak of the new coronavirus across the region. (AP Photo/Kamran Jebreili) (AP)
A man wears a mask at the Middle East Comic Con in Dubai, United Arab Emirates, Thursday, March 5, 2020. The Middle East Film & Comic Con has begun in Dubai, a city of skyscrapers and nightclubs suddenly subdued by the outbreak of the new coronavirus across the region. (AP Photo/Kamran Jebreili) (AP)
People wear face masks during the Middle East Comic Con in Dubai, United Arab Emirates, Thursday, March 5, 2020. The Middle East Film & Comic Con has begun in Dubai, a city of skyscrapers and nightclubs suddenly subdued by the outbreak of the new coronavirus across the region. (AP Photo/Kamran Jebreili) (AP)
An Emirati dressed as Nemesis from the "Resident Evil" video game series plays a guitar at the Middle East Film & Comic Con in Dubai, United Arab Emirates, Thursday, March 5, 2020. The Middle East Film & Comic Con began Thursday night in Dubai, a city of skyscrapers and nightclubs suddenly subdued by the outbreak of the new coronavirus across the region. (AP Photo/Jon Gambrell) (AP)
Emiratis Hamad al-Shamsi, left, Rashid al-Qubaisi, center, and Abdullah al-Shamsi, right, perform as the "Squad of Sharks" in a dance-off at the Middle East Film & Comic Con in Dubai, United Arab Emirates, Thursday, March 5, 2020. The Middle East Film & Comic Con began Thursday night in Dubai, a city of skyscrapers and nightclubs suddenly subdued by the outbreak of the new coronavirus across the region. (AP Photo/Jon Gambrell) (AP)
Two Emiratis watch a dance-off at the Middle East Film & Comic Con in Dubai, United Arab Emirates, Thursday, March 5, 2020. The Middle East Film & Comic Con began Thursday night in Dubai, a city of skyscrapers and nightclubs suddenly subdued by the outbreak of the new coronavirus across the region. (AP Photo/Jon Gambrell) (AP)
Bibi Zumot of Jordan, left, dressed as Mario, and Mohamed Rashed of Egypt, right, dressed as Luigi, high-five at the Middle East Film & Comic Con in Dubai, United Arab Emirates, Thursday, March 5, 2020. The Middle East Film & Comic Con began Thursday night in Dubai, a city of skyscrapers and nightclubs suddenly subdued by the outbreak of the new coronavirus across the region. (AP Photo/Jon Gambrell) (AP)
Two women wearing masks dressed as sword-wielding anime characters pose for a photograph at the Middle East Film & Comic Con in Dubai, United Arab Emirates, Thursday, March 5, 2020. The Middle East Film & Comic Con began Thursday night in Dubai, a city of skyscrapers and nightclubs suddenly subdued by the outbreak of the new coronavirus across the region. (AP Photo/Jon Gambrell) (AP)
A man dressed as Jason Voorhees from the "Friday the 13th" films stands next to a woman in cosplay at the Middle East Film & Comic Con in Dubai, United Arab Emirates, Thursday, March 5, 2020. The Middle East Film & Comic Con began Thursday night in Dubai, a city of skyscrapers and nightclubs suddenly subdued by the outbreak of the new coronavirus across the region. (AP Photo/Jon Gambrell) (AP)
A man dressed as Spiderman pauses for a selfie at the Middle East Film & Comic Con in Dubai, United Arab Emirates, Thursday, March 5, 2020. The Middle East Film & Comic Con began Thursday night in Dubai, a city of skyscrapers and nightclubs suddenly subdued by the outbreak of the new coronavirus across the region. (AP Photo/Jon Gambrell) (AP)
A cosplayer wearing the long, black nose of a plague doctor poses with a woman in a face mask for a photo at the Middle East Film & Comic Con in Dubai, United Arab Emirates, Thursday, March 5, 2020. The Middle East Film & Comic Con began Thursday night in Dubai, a city of skyscrapers and nightclubs suddenly subdued by the outbreak of the new coronavirus across the region. (AP Photo/Jon Gambrell) (AP)
Emiratis Hamad al-Shamsi, left, Rashid al-Qubaisi, center, and Abdullah al-Shamsi, right, prepare for a dance-off as Hamad al-Shamsi applies hand sanitizer at the Middle East Film & Comic Con in Dubai, United Arab Emirates, Thursday, March 5, 2020. The Middle East Film & Comic Con began Thursday night in Dubai, a city of skyscrapers and nightclubs suddenly subdued by the outbreak of the new coronavirus across the region. (AP Photo/Jon Gambrell) (AP)